लक्ष्मण पन्त | Ratopati
गणतन्त्रको सुन्दर पक्ष access_timeबैशाख ८, २०७९
२४० वर्षसम्म राजाले शासन गर्दा नेपाल अधिराज्य कहलिन्थ्यो । अधिराज्यबाट मुलुक गणराज्य बनेको छ । रैती वा प्रजाबाट जनता नागरिक बनेका छन् । यो एउटा युगान्तकारी परिवर्तन हो । राजाको सन्तान गँजेडी नसेडी, जुवाडे वा यौन पिपासु जस्तो भए पनि राजा हुने वा जनताको शा...
युक्रेनले रोजेको विनाशकारी बाटो access_timeचैत ८, २०७८
युक्रेनका दुईवटा क्षेत्रलाई स्वतन्त्र देशको मान्यता दिने रुसले गरेको निर्णयको एक साता नबित्दै राष्टपति पुटिनले युुक्रेनमाथि सैन्य हमला गर्ने आदेश दिए । यससँगै ६ लाख वर्गकिलोमीटर क्षेत्रफल र साढे चार करोड जनसंख्या भएको युरोपकै सबैभन्दा गरिब मुलुक युक्रेन गम्भीर...
नेपालले भुल्नै नहुने एउटा पाठ access_timeफागुन २७, २०७८
अन्ततः व्याख्यात्मक घोषणासहित एमसीसी संसदबाट स्वीकृत भएको छ । विगतमा गरिएका जलस्रोत सन्धिहरुमा जस्तै एमसीसीमा पनि जनमत जबर्जस्त रुपमा विभाजित बन्न पुगेको थियो । नेपालले पचासको दशकदेखि नै बेलायत, भारत, अमेरिका चीनसित आर्थिक सहयोग लिंदै आएको छ । जापान, जर्मन, क...
अमेरिकापरस्त युक्रेनले रोजेको विनाशकारी बाटो access_timeफागुन १७, २०७८
युक्रेनका दुईवटा क्षेत्रलाई स्वतन्त्र देशको मान्यता दिने रुसले गरेको निर्णयको एकसाता नबित्दै राष्ट्रपति पुटिनले युक्रेनमाथि सैन्य हमला गर्ने आदेश दिए । यससँगै ६ लाख वर्गकिलोमीटर क्षेत्रफल र साढे चार करोड जनसङ्ख्या भएको युरोपकै सबैभन्दा गरिब मुलुक युक्रेन गम्भीर संकटको...
शासकीय प्रणाली अविलम्ब फेरौँ access_timeफागुन १२, २०७८
नेपाली जनताले मुलुकमा विकास, स्थिरता, सुशासन र समृद्धि खोजेको दशकौँ भइसकेको छ । तर अहिले पनि मुलुक कमजोर र अविकसित अवस्थामै छ । भ्रष्टाचार र कमिसनतन्त्र संस्थागत भएको छ । लोकतन्त्र संस्थागत हुन सकेको छैन । राजनीतिमा अवसरवाद हाबी छ । पद र पैसामा इमान र नैतिकता बिक्...
कति छन् विदेशमा नेपाली ? access_timeफागुन १, २०७८
भारतसहित संसारका विभिन्न देशमा रोजगारी वा अध्ययनका लागि गएका नेपालीहरुको संख्या कति छ ? यस बारेमा हामीकहाँ अघिल्लो आधी शताब्दीदेखि अन्योल कायम रहँदै आयो । अन्य मुलुकको त कुरा छाडौँ, भारतमा मात्रै नेपाली नागरिकहरुको संख्या ६० देखि ७० लाख रहेको छ भन्ने कुरा बेलाबे...
किन बेठिक छ एमसीसी ? access_timeमाघ २३, २०७८
बेलायतका पूर्व प्रधानमन्त्री विन्स्ट्न चर्चिलले एकपटक भनेका थिए, म एकदिन एउटा अन्तरवार्ता दिनका लागि ट्याक्सी चढेर बीबीसी कार्यालय गएको थिएँ । त्यहाँ पुगेपछि मैले ट्याक्सी चालकलाई म नफर्किदासम्म ४० मिनेट पर्खिन अनुरोध गरें । उसले माफी माग्दै भन्यो कि म पर्खिन सक्दिन, किनभने ...
माओवादी केन्द्र र अन्य दलका महाधिवेशनबीचको भिन्नता access_timeमाघ ९, २०७८
मंसिर र पुसको महिनामा एमाले, काँग्रेस, राप्रपा र माओवादी केन्द्र गरी मुलुकका चार ठूला राजनीतिक दलका महाधिवेशन भए । नेपाली जनताले ती सबै दलका महाधिवेशनलाई नजिकबाट नियाल्ने अवसर पाए । प्रस्तुत लेखमा अन्य दलहरूले आयोजना गरेका महाधिवेशन र माओवादी केन्द्रको महा...
सिङ्गापुर, स्विजरल्यान्ड र कोरियाबाट सिक्नुपर्ने पाठ access_timeमाघ १, २०७८
विकसित मुलुकहरूमा शिक्षाको स्तर उत्कृष्ट छ । स्वास्थ्य सेवा अब्बल दर्जाको छ । सार्वजनिक यातायात सुविधा गजबको छ । कालोबजारी, कमिसनतन्त्र, मिलावट, नातावाद कृपावाद आदि केही छैन । पैसा नभएका कारण कोही पनि शिक्षा र स्वास्थ्य सुविधाबाट वञ्चित हुनु पर्दैन । शिक्षामा...
पृथ्वीनारायण शाह अत्याचारी राजा वा नेपालका निर्माता ? access_timeपुस २७, २०७८
पृथ्वीनारायण शाह अत्याचारी राजा थिए वा आधुनिक नेपालका निर्माता ? यो बहस प्रत्येक वर्षको पृथ्वी जयन्तीमा उठ्ने गरेको छ । तत्कालीन ईसाई पादरीहरू र बेलायती राज्य विस्तार अभियानमा संलग्न अंग्रेज निकट लेखकहरूले सुरुदेखि नै पृथ्वीनारायण शाहलाई एउटा अत्याचारी शासकका रूपमा चि...
हिजोका बीपी, मदन र आजका प्रचण्ड access_timeपुस ९, २०७८
जनयुद्धको सूत्रपात भएको वर्ष सन् १९९६ देखि सन् २०२१ सम्मको अढाइ दशक संसारको यात्रा हुलाक युगबाट इमेल हुँदै ह्वाट्सएपको युगमा प्रवेश गरेको छ । इन्टरनेटको यात्रा आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्ससम्म पुगेको छ । भौतिक भेटघाट र बैठकहरुलाई भर्चूअल बैठक र भेटघाटले विस्थापित गर्दै...
किन लोकप्रिय छन् नेपालमा राजनीतिक दलहरू ? access_timeमंसिर २३, २०७८
एमालेले चितवनमा लाखौं कार्यकर्ता उतारेर दशौं महाधिवेशनको उद्घाटन गरेको छ । एमालेभन्दा कमजोर संगठन कांग्रेसको पनि छैन । माओवादी पनि मुलुककै ठूलो मध्येको शक्तिशाली पार्टी हो । एमालेपछि कांग्रेस र माओवादी दल यतिखेर आआफ्ना महाधिवेशन र राष्ट्रिय सम्मेलनको चरणमा छन् । यी ...
कसरी नेपाल बन्छ ? access_timeमंसिर ५, २०७८
नेपाल किन समृद्ध र विकसित बन्न सकेन ? किन नेपाल गरिबको गरीब छ ? किन नेपाल बन्न सकेन ? हरेक दिन नेपालीहरुलाई छाया जस्तै पछ्याइरहने चार शब्दको यो सवाल जति सरल लाग्छ, त्यसको उत्तर भने सरल र सहज छैन । त्यसो त सरकारका मन्त्री र सचिवहरुले मुलुकभित्र र बाहिर नियमितजसो ...
मार्क्स, लेनिन धर्मका कटु आलोचक ! access_timeकात्तिक २८, २०७८
‘मार्क्सवादको दार्शनिक आधार भौतिकवाद हो वा द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद हो । निरिश्वरवाद मार्क्सवादको क ख ग हो । तर, मार्क्सवाद यस्तो भौतिकवाद होइन, जो कखगमा पुगेर रोकिन्छ । यो त्योभन्दा पनि अगाडि जान्छ । प्रवचनमा सीमित गरेर धर्मको मुकाबिला गर्न सकिन्न । भौतिकवादी तरीकाले ...
के गर्दैछन् भारतका माओवादी ? access_timeकात्तिक २१, २०७८
७ नोभेम्बर विश्व कम्युनिष्ट आन्दोलनको इतिहासमा एउटा विशेष महत्व बोकेको दिन हो । त्यस दिन रुसमा लेनिनको नेतृत्वमा बोल्सेभिक क्रान्ति सम्पन्न भएको थियो, जो ‘अक्टोबर क्रान्ति’को नामले चिनिन्छ । त्यसपछि पूर्वी युरोपका अनेकौं मुलुकहरू, भियतनाम, च...
पासपोर्ट बनाउनेको लाइन : वैदेशिक रोजगार बाध्यता कि छिटो धन कमाउने लालसा ? access_timeकात्तिक १५, २०७८
पासपोर्ट बनाउन राति एक बजेदेखि लाइन भन्ने शीर्षकमा रातोपाटीको वेभसाइटमा राखिएको फोटो फिचरमा नजर पुग्ने जोकोहीको पनि मन पोल्नु स्वाभाविकै हो । विशेषगरी त्यहाँ ससाना दूधे बालक बोकेर लाइनमा उभिएका आमाहरूका तस्बिर थिए । मुलुकले भोग्नुपरेको गम्भीर सङ्कटको यो एउट...
भारतको सुप्रिम कोर्ट र नेपालको सर्वोच्च अदालत access_timeकात्तिक १२, २०७८
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको पहिलो कार्यकालको अन्त्यतिर भारतको सुप्रिम कोर्टमा अभूतपूर्व विवाद चुलियो । जनवरी २०१८ मा नया“ दिल्लीको तिलक मार्गमा अवस्थित सुप्रिम कोर्टका चारजना वरिष्ठतम् न्यायाधीशहरूले पत्रकार सम्मेलन गरेर बहालवाला प्रधानन्यायाधीश दीपक मिश्...
सडक दुर्घटनाका चार कारण : ड्राइभरदेखि सरकारसम्म access_timeकात्तिक २, २०७८
केही वर्षदेखि सडक दुर्घटनाले मुलुकमा महामारीको रुप लिएको छ । सम्भवतः नेपाल संसारकै सर्वाधिक सडक दुर्घटना हुने मुलुकहरुमा पहिलो नम्बरमा पर्दछ । सडक दुर्घटनाको चर्चा गर्दा मोटरसाइकल कार, ट्रक, टिप्पर आदि यातायात र ढुवानीका साधनहरुबाट दुर्घटनामा परी ज्यान गुमाउनेहरुको ...
कम्युनिस्टहरूले दसैँ किन मनाउँदैनन् ? access_timeअसोज २८, २०७८
चाड पर्वहरुबिना मानव जीवन र मानव सभ्यताको कल्पना गर्न सकिन्न । पर्वहरूबिनाको मानवसमाज यान्त्रिक र शुष्क हुन्छ । पर्वहरूले मानवजातिभित्र सामूहिकता र सामाजिकताको सञ्चार गर्दछन् । व्यक्ति, समूह र समुदायभित्र निकटता, आत्मीयता, अन्तरघुलन र एकता निर्माण गर्न पर्वहरूको अत्यन्त ...
नेपालमा विदेशी हस्तक्षेप र घरेलु समर्थनको दायरा access_timeअसार ३, २०७८
नेपाली काँग्रेस र नेकपा झण्डै ७० वर्षअघि सँगसँगै अस्तित्वमा आए । काँग्रेसको घोषित लक्ष्य प्रजातन्त्र र समाजवाद हो । राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविकाको सुनिश्चितता नेकपाको गन्तव्य हो । तर सात दशक बितिसक्दा पनि मुलुकमा न त नेकपाको जनतन्त्र न त काँग्रेसले भन्ने गरेको प्रजातन्त्र द...
नेपालमा संसद् विघटन, दिल्लीमा खुसियाली ! access_timeपुस ९, २०७७
यो सङ्क्षिप्त टिप्पणीमूलक आलेखको आरम्भ दोस्रो विश्वयुद्ध ताकाका बेलायतका चर्चित प्रधानमन्त्री विल्सन चर्चिलको कूटनीतिसम्बन्धी एउटा मजाको टिप्पणीबाट गर्न चाहन्छु । उनले एक ठाउँमा भनेका छन्, “कूटनीतिको काम आफ्ना विरोधीलाई कलात्मक तरिकाले यस प्रकार नर्क पठाउनु हो...
जनताले बुझ्ने र मुहार फेर्ने राजनीति गरौँ access_timeकात्तिक ३, २०७७
संयुक्त राष्ट्र सङ्घले प्रतिव्यक्ति आय, सकल घरेलु उत्पादन, औसत आयु, स्वास्थ्य शिक्षाको स्तर आदिलाई कुनै पनि मुलुकको विकासको प्रमुख आधार मानेको छ । यस हिसाबले हेर्दा नेपाल विश्वकै सबैभन्दा बढी गरिब पुछारका १५, २० वटा मुलुकको समूहमा पर्दछ । देशको प्रतिव्यक्ति आमदानी सालाखाला...
समाजवादबारे बहस : हाई स्कुल पास नगरी पीएचडीका कुरा access_timeअसोज २०, २०७७
केही दिनदेखि समाजवादबारे नेपालका वामवृत्तमा फेरि बहस हुन थालेको छ । यो ‘कोरस’मा कहिलेकाहीँ नेपाली काँग्रेसका मित्रहरू पनि मिसिएको देखिन्छ । समाजवाद समाज विकासको एउटा उदात्त दर्शन तथा राजनीतिक र आर्थिक सिद्धान्त हो । समाजवादका घोर विरोधीहरूले पनि समा...
नेकपा : सपना र मिशन उडायो हुरीले access_timeसाउन २८, २०७७
मनमोहन अधिकारीबाट सुरु भएको नेपालका वामपन्थीहरुको सत्ता–यात्रा दशकमा प्रवेश गरेको छ । मनमोहनको ९ महिने सरकारपछि दुई पटक प्रचण्ड, दुई पटक ओली र एक एक पटक माधव नेपाल, झलनाथ खनाल र बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री बनेको हिसाब गर्दा मुलुकले आठवटा ‘वाम’...